15 n'ime usoro kachasị mma maka mbukota ọnụ. — News-Phu Ly Bao Co. Ltd
15 nke kacha mma ngwongwo oge.
Etu ị gha esi hazie mbukota gị:
1. Detuo ihe ndekota
Paspọtụ? Lelee. Ahịhịa? Lelee. Anwụ anwụ? Doh! Maka udo nke uche na ikpuchiri ihe nile di nkpa…
Etu esi eji akwa:
2. Zere mmeri
Nwetụla uwe ndị dị mfe ma hụ ncha na ha mgbe ị ruru? Enwela nsogbu a ọzọ. Nke mbu ị ga-ahụrịrị mgbe niile na uwe gị na-acha uhie uhie na-agbachi n'ime, na nke abụọ, jigide oghere mkpuchi ụlọ nkwari akụ ma jiri ha kpuchie isi akpụkpọ ụkwụ gị.
3. Nyefee na mkpọ mkpọ
Abatala na njem ezumike gị ma nwee ihu ntụtụ. Iji chekwaa oghere wee kwụsị ite ude, fụchie uwe gị kama kechie ha, wee tinye ha na akpa ndagwurugwu. Iji jiri akpa ndị a, tinye uwe gị, mechie akpa ahụ, wee kpochaa ikuku. Nke a ga - ahapụrụ gị ohere ka ukwuu na akpa gị, ọ ga - egbochikwa ude.
4. Cube uwe gị
Zọ ọzọ dị mma maka mbukota bụ cubes - ndị a na - enye aka kewaa ihe gị ma chọta ihe ọsọ ọsọ ozugbo ị ruru.
5. Dejupụta oghere nwụrụ anwụ
A bịa na mbukota, jiri obere akpa ọ bụla nke akpa akwa nke ị nwere ike. Tinye, akwa, sọks, na obere ihe ndị ọzọ ma tinye ha n'ime akpụkpọ ụkwụ gị iji jide n'aka na ohere ọ bụla enwere ike.
6. Nọgide na-adị ọhụrụ
Ọ dị mkpa idobe uwe gị na-esi ísì mgbe nile, karịchaa ma ọ bụrụ na ị na-eme njem dị anya. Site n'iwere obere akpa nke popourri, akwa mkpuchi akwa, ma ọ bụ igwe draịva na-esi ísì ụtọ, ị ga-eme ka uwe gị na-esi ísì ụtọ n'oge njem gị.
Etu esi eji egwu:
7. Akpa ziplock
Kedụ ka ị ga - ahazi ngwa elektrọnik, ekwentị gị, ihe ndị ahụ na -eme gị afọ ka ị gwuo ala na nchekwa? Akwa ha dị ka ndị ọzọ? Ọ dị mma, ọ bụrụ na ịchọrọ ịhazi nkwakọ ngwaahịa gị wee nweta onwe gị obere akpa nke ziplock. Chaja ekwentị, chaja igwefoto, ihe nkwụnye, ekweisi - wepu akpa rọba (ndị ị ga-eji maka akpa akpa aka) wee jiri ya chekwaa ihe eletriki, ihe maka njem njem n’ụlọ (igodo ụlọ, tiketi na-adọba ụgbọala, na igodo ụgbọ ala, na igodo ụgbọ ala, ), ọgwụ na ngwa ndị ọzọ rụrụ arụ. Ma ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya Ngwa, ị kwesịrị ị na-enyocha akụrụngwa njem anyị dị elu.
Etu esi esi eme:
8. Nnukwu owu
Iji gbochie ntụ ntụ gị ma ọ bụ onyinyo anya gị ịdọgidesi ike n’oge ị na-eme njem, dobe akwa ajị anụ dị larịị n’etiti ntụ ntụ na-ekpuchi.
Etu esi akwusi akwụkwọ:
Ma ọ bụ akụkọ nzuzu ọkụ ahụ, sci-fi na-atọ ụtọ, ma ọ bụ akwụkwọ njem nkịta nwere oke, budata ya tupu njem gị. Ọ bụrụgodi n ’ụlọ ị bụ ụdị akwụkwọ-ị ga-anwụ, chekwaa oghere na ibu maka ezumike gị. Etinyekwala na wi-fi ka ị banyeghachi n’ime akuko a site na oche oche ikpere ahu zuru oke. Gbaa mbọ hụ na ọ dị na ngwaọrụ ndị anaghị ekpuchi mmiri (lelee Otterbox maka ihe nchebe siri ike maka ozi ịntanetị gị, ekwentị ma ọ bụ mbadamba gị).
Etu esi echekwa ihe bara uru:
10. karama na ọkpọ
Iji zere ọnọdụ kacha njọ nke ịbụ onye ohi, ọ kacha mma ka mmadụ bụrụ onye echeghị echiche: atụgharịkwa ego ma ọ bụ ọla. Ọ bụrụ na ụjọ na-atụ gị maka ihe bara uru dị na ime ụlọ nkwari akụ gị, zoo ya n'ime akpa anwụ na-adịghị n'ime ya. Nwekwara ike iji arịa egbugbere ọnụ balm na-enweghị ihe ọ bụla iji zoo ndetu edebere ede.
Etu ị ga - esi zere itinye ụgwọ akpa ego:
11. Jiri ibu gị
Tinye ego na akpịrịkpa akpa wee gbaa mbọ hụ na ị tụtara akpa gị n’ụkwụ abụọ nke njem iji hụ etu ị dị nso n’ike iru. Y’oburu na nsobi oke ya, tugharia iyi ihe kariri ma obu igbutu ihe gi.
12. Zụta akwa mkpuchi adịghị mfe
Echekwala na ịzụta akpa akwa kachasị ọnụ ga-eme ka ị nweta nkwalite - kama nke ahụ, ọ nwere ike ịdọrọ ndị ohi na ọdụ ụgbọ elu na njem gị. Ọ ka mma ịghara ichegharị ma gaa maka nhọrọ dị fechaa. Ọ bụrụ n’ị na-eji akwa siri ike, nke a nwere ike ịgbakwunye kilogram anọ nke ịdị arọ tupu ịmalite ịmalite ịkwakọ, ya mere oke ọnụ anaghị adịkarị mma.
13. Mara ebe ike gị
Inye ego ibu na-adị iche iche site n’ọdụ ụgbọ elu gaa n’ọdụ ụgbọ elu. Gbalịa mara ihe ị na-agaghị emeli tupu gị eruo n'ọdụ ụgbọ elu. Somefọdụ, mana ọbụghị ndị na - ebu ụgbọ mmiri niile ga - enyere gị aka ịlele na akpa abụọ, na - enye aka ibata ibu dị iche iche (lee isi 12). Gbaa mbọ hụ na ị ghọtara nkwekọrịta mkpuchi akpa aka ma zere ụgwọ dị ọnụ ụzọ n'ọnụ ụzọ. I nwekwara ike chọọ ịgụ akwụkwọ ntuziaka aka anyị.
Etu esi egbufu akpa gị:
14. Kpoo akwa gị
Ekwela ka nsogbu ọgba ọsọ ụgbọ elu ebe ị na-achọ ngwongwo gị n'etiti ndị agbata obi ya yiri ya. Kanye akara akpa gị jiri mkpado akpa wee nye ya ntakịrị ka ọ nwee ike inye aka hụ ya ebe igwe mmadụ dị. Kechie ya na mpe mpe akwa, akwụkwọ mmado ma ọ bụ ọbụna akwa akpụkpọ ụkwụ mara mma nke mere na ọ nwere ike ịmata ya n'otu ntabi anya.
Etu aga esi anagide akpa furu efu:
15. Jikota ezigbo aka akpa
Na agbanyeghị etu anyị si chọọ akwa anyị mma, mgbe ụfọdụ ihe a na-atụghị anya ya na-eme. Mgbe ụfọdụ akpa na-efu. Gbaa mbọ hụ na ihe niile bara uru dị na akpa aka gị ma tinye akpa uwe gị na akpa gị oge niile, ọ bụrụ na nke kacha njọ na akpa gị echere / na-egbu oge. N'ụzọ ahụ, ị ​​gaghị asọ ọsọ gaa n'ụlọ ahịa ozugbo ị rutere ịzụta uwe ndochi. Ma tupu ị na-ebupụ ihe niile dị n’akpa uwe gị, enwere ike iju gị anya n’ụfọdụ ihe ndị a na-adịghị ahụkebe, ndị a na-ekweghị ka akpa gị.
Phu Ly Bao Co. Ltd (PLB) 71 - 73 Street Nke 1B, Binh Tri Dong B, Binh Tan District, Ho Chi Minh City